QM oo xilli kodhin u sameysey ciidanka la dagaalanka burcad badeeda Soomalida | Radio Baidoa
Guriga Barnaamijyada QM oo xilli kodhin u sameysey ciidanka la dagaalanka burcad badeeda Soomalida
QM oo xilli kodhin u sameysey ciidanka la dagaalanka burcad badeeda Soomalida
( Radio Baidoa, 11 November 2015) Golaha Ammaanka ee QM ayaa muddo hal sanno ugu kordhiyey Xilli-hawleedka Ciiddanka Badda ee ku sugan Xeebaha Somalia, kuwaasi oo dagaal kula jira Burcad-baddeeda qowleysan jirtey Maraakiibta isticmaala Badda Somalia.
Qaraar ka soo baxay Golaha Ammaanka ee QM ayaa lagu sheegay inkastoo la yareeyey Falalkii Afduubka ee Burcad-baddeeda, haddana waxaa weli taagan Walaac ku aadan inay dib u soo laba kacleeyaan.
15-ka xubnood ee Rigliga ku ah Golaha Ammaanka ee QM waxay hoosta ka xariiqeen inay Hawlgalkaasi door wanaagsan ka qaataan Maraakiibta Urur-gobaleedyadda, sida Ciiddanka Badda ee Midowga Europe “The European Union Naval Force (EUNAVFOR) iyo kuwa Isbahaysiga The North Atlantic Treaty Organization Operation (NATO).
Goluhu waxay ugu baaqeen Dowladaha iyo Urur-gobaleedyadda inay Maraakiib dagaal, hub iyo Diyaaradaha Milliteriga iyo Taageero Loojistiko ka geystaan Hawlgalka La-dagaalanka Burcad-baddeeda ka qowleysata Badda Somalia.
Golaha waxay Qaraarkooda ku muujiyeen in Mas’uuliyadda Koowaad ay hortaalo Somalia oo ah Waddan ay colaado ka socdaan muddo 25-sanno, waa sida lagu xusay Qaraarkaasi.
Dhinaca kale, Goluhu waxa uu ku eedeeyey Burcad-baddeeda inay Lacago badan ku hurin karaan Dembiyo kale oo dheeraad ah iyo Musuqmaasaqa.
Golaha Ammaanka ee QM waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin Awoodda xadidan ee Dhinaca Sharciga iyo Dacwadaha ka dhanka ah, iyagoo sheegay inay mararka qaarkood taasi horseedo in la iska sii daayo Burcad-baddeeda iyadoo aan la hor-geynin Caddaaladda.
Tan iyo markii ay Golaha Ammaanka ee QM ansixiyeen Faragelinta Ciiddanka Badda ee Caalamiga ee Xeebaha Somalia sannadkii 2009-dii, waxaa yaraaday Falalkii Burcad-baddeeda ku qafaalan jireen Maraakiibta Ganacsiga iyo kuwa Dalxiiska ee isaga kala goosha Badda Somalia iyo Caalamka kale.